Iwuli ulo n'ime uzo obula nke ahia ndi ahia gi | Martech Zone
Imechi ire ere bụ nnukwu oge. Ọ bụ mgbe ị ga - eme mmemme niile abanyela n’ahịa ọhụrụ. Ọ bụ ebe a napụtara mbọ ndị gị niile na ngwaọrụ CRM na MarTech gị. Ọ bụ a pop-na-champeenu na-eku ume a ume nke enyemaka oge.
Ọ bụkwa naanị mmalite. Gaanụ-eche echiche ahịa otu na-aga n'ihu obibia ijikwa njem ndị ahịa. Mana mmeghari n’etiti ngwa ọdịnala nwere ike ịhapụ ọdịiche na njikọ aka n’etiti ịbịanye aka na akara akara na mkparịta ụka ọhụrụ. Nke a bụ ebe njikwa njikwa ahịa ndị ahịa nwere ike ịme ihe dị iche.
Ihe a hụworo dị ka ngwa ahịa dị ike dịkwa ugbu a bụkwa akụkụ dị mkpa iji hụ na ndị ahịa na-aga nke ọma. N'oge usoro ire ere, ilekwasị anya na uru nwere ike mepụta azụmahịa azụmaahịa maka ngwaahịa gị yana usoro ntọala maka mpaghara nke kachasị mkpa ndị ahịa ọhụrụ gị. Enweghị ntinye aka na nzukọ ndị ahịa bara uru n'ogologo, ọ dị mfe ịhapụ ida isi na ntọala a ka mmekọrịta ahụ na-emikwu. Yabụ, ịnwe ngwaọrụ bara uru nke ndị ahịa gị na ndị otu ọfụma ga-eji mee ihe dị oke mkpa.
Ozi na nghọta niile gbakọtara n'oge usoro ire ahịa nwere ike ịpụta oke uru na ijikwa nkuchi yana itinye ngwa ahịa nke ngwaahịa gị. A sị ka e kwuwe, ihe ịga nke ọma ndị ahịa na-adabere n'echiche nke ịnye ndị ahịa gị uru bara uru.
Okwu maka ọtụtụ ndị otu ihe ịga nke ọma na ndị ahịa bụ otu esi eme ka ọnụ ahịa ahụ baa ụba ma gosipụta ya n'ụzọ dị egwu. Nke a bụ ebe ịnwe ezigbo oge dashboard bara uru enyere nwere ike ime ihe dị iche na njigide na nlọghachi. Kama igwu egwu, ime ka iwelata ego, ma ọ bụ ịnagide ọnụego dị elu, ịdabere na njikwa uru ndị ahịa na-enye ndị ahịa ihe ịga nke ọma ikike iji gbochie ihe mgbochi ọdịnala ọdịnala, na-emeghe ụzọ iji bulie / ire ere site na iji ezigbo ụwa ROI na uru usoro.
Ọmụmaatụ, Ọrụ, Onye ndu na njikarịcha arụmọrụ na-arụ ọrụ dijitalụ, mere ka ndị ọrụ njikwa uru ahịa dị n'aka ndị otu ya ụlọ ọrụ. Nke a nyeere onye ọ bụla na-ahụ maka ọrụ na-eche ndị ahịa aka ịgbakọ na ịkekọrịta ọnụọgụ bara uru dị omimi. N'ihi nke a, onye ọ bụla nwere ike ijikọ mkparịta ụka ha, ihe ngosi ha, yana akụrụngwa na uru bara uru nke ServiceNow na-ewetara ndị ahịa ya. N'ihi mgbalị ndị a, ụlọ ọrụ ahụ meziwanye mmeri ya na ọrụ ndị na-eduzi n'ọhịa site na 1.7X ma jiri okpukpu abụọ gbakwunye ọnụego na ohere ahịa.
Nke a bụ usoro doro anya maka ịmepụta ndị ahịa maka ndụ, nke bụ oke ihe ịga nke ọma maka otu ndị otu gị siri jikwaa ndị ahịa ahụ. Ime uru a isi nkuku nke nkwukọrịta gị na mmekọrịta ụlọ bụ ihe dị mkpa nke a. Mkparịta ụka ọnụ ọgụgụ bara ụba nwere ikike ịmeghe ọkwa ọhụụ. Nke a bụ otu ụlọ ọrụ si eme mgbanwe site na ndị na-ere ahịa gaa na onye ndụmọdụ tụkwasịrị obi. Na ime nke a, ire ere na ire ere na-abụ mkparịta ụka mkparịta ụka sitere na nghọta dị elu. N'ụzọ nke a, mmekọrịta na-abụ mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ọnụ ahịa ndị ahịa ogologo oge (LTV) na ngbanyeghachi ego na enweta ego (NRR) na-abawanye nke ọma.
Site na ilekwasị anya na uru, ụlọ ọrụ nwere nghọta ha chọrọ iji mee ka mmekọrịta kachasị adị na-eto ma na-eto ha dabere na nghọta nwere mmekọrịta na ndị ahịa ha. Mkparịta ụka oge niile nke uru enyere, kama naanị mgbe mmeghari ohuru nọ na tebụl ma ọ bụ ndị ahịa na-eme mkpesa, na-enyere ụlọ ọrụ aka ịtọ ntọala karịa ngwa ngwa maka mmekọrịta mmeri-mmeri. Ọ bụrụ n ’ọganiihu ndị ahịa gị nwere ike ibuli mkparịta ụka ha na ọkwa ndị isi, mkparịta ụka ọhụrụ nwere ike lekwasị anya na ihe ị ga - eme na - esemokwu arụzuola ọrụ gara aga. Ihe niile gbasara ịsụ asụsụ azụmahịa na ọnụ ahịa ego. Nke a na - emekwa ka mmekọrịta ndị a gbadoro ụkwụ na atụmatụ maka ọdịnihu kama ịkpa nkata na ịkọwa mmekọrịta ahụ.
Uru bụ mkparịta ụka na-aga n'ihu
Dịka mkpa si agbanwe, azụmaahịa na-agbanwe, na-agbasa, ma na-adị mkpa, ihe ndị ahịa gị ji elele mgbanwe na oge. Regachi-eleta uru metrics mgbe niile otu gị na ndị ahịa gị lekwasịrị anya dị mkpa. Akụkụ nke itinye aka na ihe ịga nke ọma ndị ahịa kwesịrị ịtụle ma guzobe akara ngosi ọhụụ maka ihe ịga nke ọma iji hụ na gị na ndị ahịa gị na-eme atụmatụ maka ọdịnihu ọnụ. Nke a bụ isi ihe dị na njem ndị ahịa na-ekerịta.
Site na itinye uru n'etiti njem ndị ahịa gị, ndị otu gị nwere ụzọ dị egwu iji wulite na ihe ịga nke ọma ma mepụta ezigbo omume nke uru ndị ahịa. Nsonaazụ nke gụnyere gụnyere uru gafere njem ndị ahịa zuru oke doro anya: Abawanye afọ ojuju ndị ahịa. Belata ahịa churn. Ogologo onye nkwalite Net (NPS). Enweta ego dị ukwuu karịa (NRR). Ihe niile a na - eweta uru dị ala nke siri ike, atụ, ma nwee isi.
Tags: CRMnjem ndị ahịanjem ndị ahịanjikwa mmekọrịta ndị ahịanjikarịcha arụmọrụ dijitalụngwa ahiaArụ ọrụ arụ ọrụ ahịaservicenowarụ ọrụ arụmọrụnjikarịcha ọrụ